Mgbe i nwere ihe iPhone n'aka gị, ị ga-chọrọ ka mmekọrịta ya na iTunes, Outlook, Google, kọmputa, Facebook, Yahoo !, wdg maka data nyefe. The Atụmatụ na usoro ebe a nye gị ngwọta dị mfe ijide ya aka. Dị na-agụ ihe ndị dị na na ekpe na-ahụ ihe ị chọrọ.
Olee otú mmekọrịta music si iTunes ka iPhone
Echekwara ọtụtụ narị puku ndị songs na iTunes Ọbá akwụkwọ na chọrọ ka mmekọrịta ka iPhone? Ọ pụghị ịbụ mfe. Ebe a, ga-amasị m na-egosi gị abụọ ụzọ ka mmekọrịta iTunes music ka iPhone. Otu bụ iji iTunes, ndị ọzọ na-arịọ enyemaka site n'aka ndị ọzọ ngwá ọrụ - Wondershare TunesGo ma ọ bụ Wondershare TunesGo (Mac).
Method 1. mmekọrịta music ka iPhone na iTunes
Method 2. mmekọrịta music si iTunes ka iPhone na site na iPhone ka iTunes na TunesGo
Nzọụkwụ 1. Run iTunes na kọmputa gị na jikọọ gị iPhone na kọmputa site ịkwụnye a eriri USB.
Nzọụkwụ 2.-aga n'aka ekpe sidebar nke iTunes, na pịa gị iPhone na-egosi ya akara panel ke ziri ezi.
Nzọụkwụ 3. Na nri, pịa Music taabụ. Mgbe ahụ nne Mmetụta mmekọrịta Music. Họrọ Niile music n'ọbá akwụkwọ ma ọ bụ họrọ listi ọkpụkpọ, nka, albums, na Genres.
Nzọụkwụ 4. Gaa na ala nri akuku na pịa Mee.
IHE: Ị ga-aghọta na mgbe syncing iTunes music ka iPhone, a dialog Pop elu-agwa gị na ọ ga-ewepụ data na gị iPhone tupu syncing.
Ọ dịghị mkpa ma ọ bụrụ na data na gị iPhone na-na iTunes. Otú ọ dị, ọ bụrụ na data na gị iPhone bụ mbụ, na ọ bụghị na iTunes, ị ga-ata ahụhụ dị ukwuu data ọnwụ mgbe syncing. Iji zere nke a, ị ga mma ise nkwado si a-atọ ndị ọzọ ngwá ọrụ. Wondershare TunesGo ma ọ bụ Wondershare TunesGo (Mac) bụ a nri otu maka gị.
Mmekọrịta music si iPhone ka iTunes, n'agbanyeghị ma na ha na-zụrụ ma ọ bụ.
Mmekọrịta iTunes music ka iPhone na retaining ihe niile na iPhone.
Na-zuru music Ama, gụnyere Fim, skips, play akaụntụ, wdg
Nkwado iPhone 6s (Plus), 6 (Plus), 5c, 5s, 4s, 4, 3GS nke na-agba ọsọ na iOS 9, iOS 8, iOS 7, iOS 6, na iOS 5;
Nzọụkwụ 1. Jikọọ iPhone na kọmputa na-agba ọsọ TunesGo
Download na wụnye Wondeshare TunesGo na kọmputa. Jiri eriri USB na-esi gị iPhone jikọọ na kọmputa. Ozugbo ejikọrọ ịga nke ọma, gị iPhone ga-egosipụta ke akpan window.
-Ekwe nkwa na Wondershare TunesGo na-arụ ọrụ kwesịrị ekwesị, ị chọrọ nwụnye iTunes na kọmputa kwa. E wezụga na, na Windows na Mac nsụgharị na-arụ ọrụ fọrọ nke nta ahụ. N'ihi ya, m nnọọ na-Windows version dị ka ihe atụ.
Nzọụkwụ 2. mmekọrịta songs si iTunes ka iPhone
-Aga n'aka ekpe sidebar, pịa Playlist. Pịa triangle n'okpuru Add. Nke a na-elu a dialog, na nke ndị niile na listi ọkpụkpọ na iTunes n'ọbá akwụkwọ na-e. Họrọ gị chọrọ listi ọkpụkpọ na pịa OK. Mgbe ahụ, playlist na songs na iTunes n'ọbá akwụkwọ ga-synced gị iPhone.
Nzọụkwụ 3. mmekọrịta iPhone music ka iTunes
N'adịghị ka iTunes, Wondershare TunesGo-ahapụ gị mfe mmekọrịta iPhone music na ndetuta egwu ọkpụkpọ ka iTunes Ọbá akwụkwọ, n'agbanyeghị ma na ha na-zụrụ ma ọ bụ.
Ke akpan window, dị nnọọ pịa Iji iTunes> Malite> Detuo na iTunes ka mmekọrịta music na ndetuta egwu ọkpụkpọ ka iTunes. The songs ugbua ẹdude iTunes n'ọbá akwụkwọ ga-ẹdụk, otú ị na-adịghị mkpa iche banyere duplicates.
E wezụga shortcut, ị nwekwara ike na-aga Media na Playlist na ekpe sidebar ka mmekọrịta iPhone music na ndetuta egwu ọkpụkpọ ka iTunes n'ọbá akwụkwọ.
Best iPhone Nyefee Software
Copy Ndi ana-akpo si Nokia ka iPhone
Atụmatụ na Ihichapụ iPhone
Olee otú mmekọrịta foto site na iTunes ka iPhone
Ọ dị mfe ka mmekọrịta foto iPhone na iTunes. iTunes bụ ihe niile ị chọrọ. Otú ọ dị, e nwere otu ihe dị mkpa ka ị mara na oge ọ bụla ị mmekọrịta foto site na iTunes ka iPhone, ndị ẹdude na gị iPhone ga-ewepụ. Nke ahụ bụ ikwu, ị nwere ike na-ata ahụhụ foto ọnwụ mgbe foto mmekọrịta.
Agbanyeghị, ka mmekọrịta foto iPhone, ị pụrụ ịgbaso nkuzi:
Nzọụkwụ 1. Wụnye na-agba ọsọ iTunes na kọmputa.
Nzọụkwụ 2. Jikọọ gị iPhone na kọmputa na eriri USB. Mgbe ejikọrọ ịga nke ọma, gị iPhone ga-emere na ekpe kọlụm.
Nzọụkwụ 3. Mepụta a nchekwa na kọmputa gị na idetuo na mado gị chọrọ photos na ya.
Nzọụkwụ 4. Na iTunes, pịa gị iPhone na-egosi ya akara panel. Mgbe ahụ, pịa Photos. Kwụpụ 5. Akọrọ mmekọrịta Photos si. Agagharị kọmputa gị ga-na-ahọrọ foto nchekwa ị kwadebeworo. Nzọụkwụ 6. Na ala nri akuku, pịa Mee na-amalite syncing foto site na iTunes ka iPhone.
Olee otú mmekọrịta videos na site na iPhone
Nwere ụfọdụ na-akpali obere vidiyo na iPhone ma na-achọ ka mmekọrịta gị iPhone maka ntụrụndụ? Mgbe iwughachi gị iTunes n'ọbá akwụkwọ, ị na-eme atụmatụ ka mmekọrịta zụrụ fim iPhone ka iTunes? N'agbanyeghị ihe ị na-achọ ime, ị pụrụ ịchọta azịza ebe a.
Part 1. mmekọrịta video ka iPhone na iTunes
Part 2. mmekọrịta video si iPhone ka iTunes
Nzọụkwụ 1. Open iTunes na pịa Movies na ekpe. E wezụga na fim, ị nwekwara ike mbubata na tiivi, pọdkastị na ndị ọzọ. Ebe a, m na-nkiri dị ka ihe atụ.
Kwụpụ 2. Gaa Njikwa na ya dobe ala menu, họrọ Tinye File ka Library ... mbubata ọkacha mmasị gị nkiri na iTunes Library.
Nzọụkwụ 3. ikwunye na eriri USB jikọọ gị iPhone ka na kọmputa. Mgbe ejikọrọ, gị iPhone ga-egosi n'elu n'okpuru NGWAỌRỤ. Nzọụkwụ 4. Pịa gị iPhone bugota ya akara panel. Site na ịpị Movies, ị na-nkiri syncing window. Kwụpụ 5. Akọrọ mmekọrịta Movies ma họrọ gị chọrọ fim. Mgbe ahụ, na-aga na ala nri akuku na pịa Mee.
Cheta na: Na iTunes mmekọrịta, data ẹdude na gị iPhone ga-ewepụ. Ya mere, echiche nke ọma tupu syncing nkiri na iPhone na iTunes.
Nzọụkwụ 1. Run iTunes na kọmputa gị na pịa Store> ikikere nke a Computer .... Wet ke gị Apple ID na paswọọdụ. Nzọụkwụ 2. Bilie gị iPhone ejikọrọ na eriri USB. Mgbe ọ bụ gosiri na hapụrụ kọlụm, nri pịa ya. Na ndọpụta menu, họrọ Nyefee ịzụrụ. Nzọụkwụ 3. Chere ruo mgbe syncing usoro na dechara.
Cheta na: N'ụzọ dị otú a, ị na-ekwe ka mfe mmekọrịta iPhone zụrụ video ka iTunes. Otú ọ dị, dị ka ndị na-abụghị zụrụ n'anya, ị ga-agwa enyemaka site na ụfọdụ ndị ọzọ ngwá ọrụ.
Olee otú mmekọrịta iPhone ka PC
Mgbe abịa syncing iPhone na kọmputa, ị nwere ike depụta si ọtụtụ ihe. I nwere ike inwe ọhụrụ na kọmputa na nnọọ na ị chọrọ ka mmekọrịta data gị iPhone na kọmputa maka nchekwa. Ma ọ bụ, ị kwụsịrị data na kọmputa gị ruru ka a na kọmputa okuku, usoro reinstallation, ma ọ bụ ndị ọzọ. N'agbanyeghị ihe ọ bụla kpatara ya bụ, m n'aka, ihe kacha mkpa bụ otú mmekọrịta iPhone na kọmputa.
Dị ka ị na-ahụ, iTunes bụ otu ụzọ na-mmekọrịta software, nke dị na-ahapụ gị mmekọrịta data ka iPhone, ọ bụghị ụzọ ọzọ gburugburu. N'ihi ya, na-aka ya, ị mkpa ụfọdụ enyemaka. Wondershare MobileTrans Ma ọ bụ Wondershare MobileTrans maka Mac-abịa kemfe. N'agbanyeghị ma na ị chọrọ ka mmekọrịta iPhone ọhụrụ kọmputa ma ọ bụ ndị ọzọ na kọmputa, ọ nwere ike mee nke a maka gị.
Na akụkụ n'okpuru, m na-eche syncing iPhone ka PC. Ọ bụrụ na ị na-eji a Mac, biko gaa n'aka ekpe ọdịnaya na pịa mmekọrịta iPhone ka Mac.
iPhone ka PC mmekọrịta software
Mmekọrịta audio, video, foto na ozi site na iPhone ka PC na 1 Pịa.
Mmekọrịta kọntaktsị na iPhone si ebe nchekwa, iCloud, Gmail, Yahoo! na ndị ọzọ na-PC.
Weghachi iPhone na data synced ka PC n'oge ọ bụla.
Dakọtara na iPhone 5 / 5s / 5c / 4S / 4 / 3GS.
Nzọụkwụ 1. Gbaa ndị software na PC
Na mbụ, ibudata na wụnye software na PC. Na-agba ọsọ ya. Mgbe ya isi window-egosi na n'elu, na-aga na nkwado ma weghachite mode na pịa ndabere.
Cheta na: Biko wụnye iTunes iji jide n'aka na a na-arụ ọrụ software kwesịrị.
Nzọụkwụ 2. Jikọọ gị iPhone ka PC site na eriri USB
Wepụ ihe Apple eriri USB jikọọ gị iPhone ka PC. Nke a software ga chọpụta gị iPhone ozugbo o kwere omume. Mgbe ahụ, gị iPhone ga-egosipụta na ekpe kọlụm.
Na n'etiti window, họrọ ọdịnaya na ị chọrọ ka mmekọrịta. Ị nwere ike mmekọrịta music, video, photos, ozi na kọntaktị na iPhone ka PC n'otu oge.
Cheta na: Pọdkastị, TV na-egosi, iTunes U ga-synced na music na video.
Nzọụkwụ 3. mmekọrịta iPhone ka PC
Pịa Malite Copy na a softwrae amalite ka mmekọrịta iPhone data ka PC. Jide n'aka gị iPhone na-mgbe ejikọrọ.
Olee otú mmekọrịta Yahoo! na kọntaktị na kalenda na iPhone
Ka mmekọrịta Yahoo! kọntaktị na iPhone, i nwere ike iri ndị na-esonụ.
Nzọụkwụ 1. Kpatụ Ntọala na gị iPhone ịbanye mwube ihuenyo. Enweta Mail, Ndi ana-akpo, kalenda.
Nzọụkwụ 2. Kpatụ Tinye Akaụntụ ma họrọ Yahoo!
Nzọụkwụ 3. Wet ke gị Yahoo! ozi akaụntụ, gụnyere, aha, email, paswọọdụ, nkọwa.
Nzọụkwụ 4. Kpatụ Next na mgbe ahụ gbanye Ndi ana-akpo na kalenda . Enweta Save. Kwụpụ 5. Nke ahụ bụ ụzọ mmekọrịta Yahoo! kalenda na kọntaktị na iPhone.
Olee otú mmekọrịta iPhone ka Android na mmekọrịta Android ka iPhone
Dị nnọọ okporo mmiri gị ochie iPhone maka ihe Android ekwentị, dị ka Samsung S5, ma na-achọ ka mmekọrịta iPhone kọntaktị na gam akporo? Na-awụlikwa elu mmiri iji iPhone 5s, naanị na-ahụ na kọntaktị niile ka na-rapaara na Android ekwentị? Echegbula. N'agbanyeghị ma na ị chọrọ ka mmekọrịta kọntaktị site na Android ka iPhone ma ọ bụ site iPhone ka Android, ebe a bụ ụzọ.
Mmekọrịta kọntaktị site na Android ka iPhone, na site na iPhone ka Android mfe.
Mmekọrịta ozi, music, video na foto seamlessly.
Mbubata / mbupụ kọntaktị na / si VCF, Windows Live Mail, Windows Address Book.
Tọghata kedi ọdịyo na video ka iPhone / Android ngwaọrụ enyi na enyi formats.
Na-arụ ọrụ n'ụzọ zuru okè na iPhone 3GS / 4S / 4/5 / 5s / 5c na-agba ọsọ iOS 5/6/7.
Nzọụkwụ 1. Launch software na kọmputa
Ka malitere, download na wụnye Windows ma ọ bụ Mac version na kọmputa gị. Ebe a, na-ahapụ '-elekwasị anya na Windows version. Mac ọrụ biko soro yiri nzọụkwụ.
Gbaa ndị software. Ke akpan window, na-aga na ekwentị ekwentị mode site na ịpị Malite.
Nzọụkwụ 2. Jikọọ gị iPhone na Android ekwentị na kọmputa
Ikwunye na eriri cables na-esi gị iPhone na Android ekwentị ejikọrọ. Nke a software ga-amata ha n'oge na-adịghị, na mgbe ahụ na-egosi ha na ekwentị transfer window.
Ka mmekọrịta iPhone na kọntaktị na ndị ọzọ na-Android ekwentị, gị iPhone ga-gosiri na n'aka ekpe, na Android ekwentị na nri.
Ka mmekọrịta Android data ka iPhone, ị kwesịrị ị na eme ka n'aka gị iPhone-egosi na nri, na Android ekwentị na n'aka ekpe.
Nzọụkwụ 3. mmekọrịta iPhone na Android
Họrọ ọdịnaya na ị chọrọ ka mmekọrịta na n'etiti. Ị na-ekwe ka mmekọrịta music, video, photos, na kọntaktị na ozi na oge na 1 Pịa. Mgbe ahụ, pịa Malite Copy.
Olee otú mmekọrịta iPhone ka iPad
Enyi m kasị mma dị nnọọ wee ọhụrụ iPad. O nwere ihe iPhone na-akawanye kwadoo ka iCloud. Anyị apụghị chepụta otú ka mmekọrịta nke Ama ya iPhone ka iPad. Ihe ọ bụla ọzọ ọrụ.
Syncing iPhone na iPad bụghị ihe siri ike iCloud na iTunes dị mma inyeaka maka gị. Na akụkụ n'okpuru, m na-eche na-agwa gị otú iji iCloud ka mmekọrịta iPad na iPhone. Ọ bụrụ na ị na-ahọrọ iji iTunes, biko pịa ebe a.
Soro nzọụkwụ n'okpuru
Nzọụkwụ 1. On gị iPhone, Tụgharịa na WiFi netwọk.
Nzọụkwụ 2. Kpatụ Ntọala. On Ntọala ihuenyo, enweta iCloud. Banye na gị iCloud akaụntụ. Nzọụkwụ 3. Kpatụ Nchekwa & ndabere na-atụgharị na iCloud ndabere na enweta OK. Mgbe ahụ, enweta Back Up Ugbu a. Nzọụkwụ 4. Mgbe nkwado ndabere na mpaghara usoro zuru ezu, ego ọhụrụ ndabere oge iji hụ na nkwado ndabere na mpaghara usoro bụ ịga nke ọma. Kwụpụ 5. On gị iPad, soro ntuziaka na ihuenyo. Họrọ asụsụ na mba, ikpebi ma ị enyere ndị obodo ọrụ. Tụgharịa na WiFi netwọk. Nzọụkwụ 6. Mgbe ọ na-abịa mwube gị iPad, họrọ Weghachi si iCloud ndabere. Abanye n'ime gị Apple ID na paswọọdụ. Kwụpụ 7. Họrọ ọhụrụ ndabere gị iPhone na enweta Weghachi. Chere ruo mgbe mgbake na-agwụ agwụ.
Ọ dị oke na-ewe oge ka mmekọrịta iPhone na iPad site na iji iCloud? Non-zụrụ music na video na gị iPhone-apụghị synced ka iPad dị otú a? Echegbula. Ebe a bụ otu-pịa iPhone ka iPad mmekọrịta software aha ya bụ Wondershare MobileTrans. Na ya, i nwere ike mmekọrịta music, video, foto na kọntaktị site na iPhone ka iPad conveniently na mfe.
Mụta otú ka mmekọrịta iPhone na iPad na Wondershare MobileTrans ebe a >>
Olee otú mmekọrịta iPod ka iPhone
Echekwara nza nke songs na gị iPod na ike na-eche ka mmekọrịta ka iPhone? Na iTunes, ị nwere ike mmekọrịta gị niile zụrụ songs si iPod ka iPhone. Na-eje ije site na mfe nduzi n'okpuru.
Nzọụkwụ 1. Run iTunes na pịa Store. Mgbe esiri-ala menu egosi, pịa Anthorize Nke a Computer ... ịrịba ama na akaụntụ na ị na-eji ịzụta music. Nzọụkwụ 2. Jikọọ gị iPod na kọmputa na iji eriri USB. Ozugbo ahụrụ, gị iPod ga-emere na ekpe sidebar nke iTunes. Nzọụkwụ 3. Right pịa ma ọ bụ ịchịkwa pịa gị iPod iji nweta ya esiri-ala menu. Pịa Nyefee ịzụrụ. Nzọụkwụ 4. Ugbu a, zụrụ songs na gị iPod na-na iTunes. Ikwunye gị iPod na jikọọ na gị iPhone na kọmputa. Kwụpụ 5. site na ịpị gị iPhone, ya akara panel na-egosi na nri. Pịa Music. Tinye akà rà mmekọrịta Music. Họrọ Niile music n'ọbá akwụkwọ ma ọ bụ họrọ listi ọkpụkpọ, nka, albums, na Genres. Nzọụkwụ 6. Click Mee ka mmekọrịta iPod music ka iPhone.
Cheta na: Dị ka m kwuru n'elu, iTunes nwere ike mmekọrịta zụrụ iPod music ka iPhone. Otú ọ dị, ọ pụrụ ime ihe ọ bụla ka mmekọrịta ndị na-abụghị zụrụ song si iPod ka iPhone. Ka njọ, site syncing, niile songs ẹdude na gị iPhone ga-anọchi ndị si iPod. Gịnị ma ọ bụrụ na songs ẹdude na gị iPhone na-mbụ? Ihe a oké mfu ahụ ga-abụ!
Na nke a, m nwere ike ikwu gị ihe iPod ka iPhone mmekọrịta software. Ọ bụ Wondershare MobileTrans (Windows) ma ọ bụ Wondershare MobileTrans maka Mac. Na ya, i nwere ike ka mmekọrịta niile audio, video, na kọntaktị na foto site na iPod ka iPhone na efu àgwà ọnwụ.
Mụta otú sy NC iPod na iPhone site na iji MobileTrans
Olee otú ndabere iPhone ka Computer na na-enweghị iTunes
Olee otú Hichapụ a Playlist si iPhone Ozugbo
> Resource> iPhone> A Full Guide na Olee otú ka mmekọrịta iPhone